ल हेर्नुस वडाध्यक्षकाे दशैंकाे चर्तिकला, रक्सी पिएर गरे यस्तो रमिता…. – PathivaraOnline
Home > समाज > ल हेर्नुस वडाध्यक्षकाे दशैंकाे चर्तिकला, रक्सी पिएर गरे यस्तो रमिता….
ल हेर्नुस वडाध्यक्षकाे दशैंकाे चर्तिकला, रक्सी पिएर गरे यस्तो रमिता….
ओखलढुङ्गा। दशैंमा मदिरा पिएर सर्वसाधरणलाई कुट्दै हिंड्ने एक वडाध्यक्षको दशैंको मैजारो प्रहरी खोरमा भएको छ । ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका– ६ थाक्लेका वडाध्यक्ष हेमराज राईले सर्वसाधारण र पेट्रोल पम्प सञ्चालकमाथि कुटपिट गरेपछि प्रहरी खोरमा पुगेका हुन् । रक्सी पिएर सर्वसाधारणमाथि हातपात गर्दा राई प्रहरी खोरमा पुगेका छन् । रक्सी पिएर अर्पण आयल हर्कपुरका व्यक्तिहरू माथि अाक्रमण गरे ।
उनले हर्कपुरका सञ्चालक र स्थानीय युवा ठाकुर अधिकारीमाथि आक्रमण गरेपछि राई प्रहरी खोरमा पुगेका हुन् । शनिबार राति रक्सीले मातेर पेट्रोल पम्पमा पुगेका राईले सञ्चालक र स्थानीयमाथि हातपात गरेपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रमुख अनन्तराम शर्माले अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइने बताए ।
शर्माले जिम्मेवार व्यक्ति नै झडपमा उत्रिएपछि कानुनी कार्बाही गर्नु परेको दावी गरे । स्थानीय तहको चुनाव अघिसम्म राईले यातायात क्षत्रेमा गुण्डागर्दी गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ । वडा अध्यक्षबाटै असुरक्षित हुने अवस्था आएको पीडित पक्षले गुनासो गरेका छन् । घटनापछि प्रहरीले हर्कपुरबाट राईलाई पक्राउ गरेको थियो ।
काठमाडौंमा आज यस्ता दुई ब्याक्तिलाई प्रहरीले गर्यो पक्राउ, थियो लामो समय देखि प्रखाई